Burcad internet-ka oo luqadda Ruushka ku hadlaysay ayaa looga shakinayaa in ay dheceen $10 milyan oo dollar oo ay ka xadeen shirkado ku yaalla Ruushka, Britain iyo Mareykanka. - somalilandlivemedia
10:58 13. December 2017
Kevin Curran, waa khabiir madaxbannaan oo ka shaqeeya amniga-internetka, wuxuu sheegay in weerarrada “ay xilligan aad u sii adkaanayaan”.
“Dhinac marka laga eego way dhameystiran yihiin,” ayuu u sheegay BBC-da. “Waxay awoodaan in hannaanka kombuutarada ay dhexgalaan, ka dibna la baxaan dhammaan warqadaha cadeynaya sida bangiyada u shaqeeyaan. Taasi waxay siinaysaa fursad ay ku sameeyaan qaabab been abuur ah oo lacag ay ku helaan.”
Macluumaadka difaaca Australia oo “la xaday”
Yahoo oo ‘Hal bilyan’ oo macluumaad laga xaday
Group-IB oo warbixinta soo saartay waxay burcadda ugu yeertay “MoneyTaker” ka dib markii sida la sheegay, Virus ay adeegsadeen ku xadeen $500,000 oo dollar, 16 weerar gudahood oo ay la eegteen shirkadaha Mareykanka.
Kooxda burcadda Internet-ka waxay iska ilaaliyeen in la dabagalo “ayagoo si joogto ah u bedelayay qalabka iyo xeeladaha ay adeegsadaan. Waxay baabi’inayaan meelaha laga dabagali karo ka dib marka ay dhameeyaan howlgalkooda”, sida lagu qoray warbixinta Group-IB.
Weerarkii ugu horeeyay ee burcaddan waxay ku baabi’iyeen shabakadda ‘First Data’s Star’ oo ah meel ay adeegsadaan illaa 5,000 oo bangi.
“Haddii khubarro ay ku soo weeraraan, way adag tahay in laga hortago,” ayuu yiri Prof Curran said. “Way adkeysan karaan illaa ay dhexgalaan kombuutarka.”
Qaar ka Mid ah Culimadda Caasimadda oo Baaq Nabadeed u Diray Beelo Ku Diriray Dararweyne
Newer PostHalkan kadaawo Qaabkii ay Hargaysa uga Qabsoontay Munaasibadii uu Xilka kula Wareegay Muuse Biixi
Older Post Madaxwaynihii hore Somaliland ayaa niyad Xumaan Murugo kamuujiyay sida aduunku Somaliland uga Jeestay,